Ciidammada gadooday ee Ivory Coast oo siidaayay wasiir ay qabsadeen - BBC Somali
Ciidammada gadooday ee Ivory Coast oo siidaayay wasiir ay qabsadeen
8 Jannaayo 2017
Image caption Ciidammada gadooday ayaa dhabarka ka taagan Wasiirka Gaashaandhigga Alain Richard Donwahi
Madaxweynaha waddanka Ivory Coast, Alassane Ouattara, ayaa sheegay in la gaaray heshiis lagu soo afjarayo gadoodkii ay ku dhaqaaqeen qaar ka mid ah ciidammada milateriga waddankaasi.
Mr Ouattara ayaa sheegay in dalabka ciidammada ee ah in la kordhiyo mushaarkooda sidoo kalana la wanaajiyo xaaladaha ay ku nool yihiin wax laga qaban doono, waxa uuna ugu baaqay inay dib ugu laabtaan xeryahooda.
Hadalka madaxweynaha ayaa yimid waxyar un kaddib markii la sii daayay wasiirka gaashaandhigga Ivory Coast oo ay madax furasho ahaan u haystay ciidammada gadooday.
Wasiirka gaashaandhigga, Alain Richard Donwahi, ayaa saacado gelinkii dambe ee Sabtidii ku qaatay wadaxaajood uu la lahaa ciidammada gadooday ee ku sugan magaalada Bouake ee bartamaha Ivory Coast.
Hasayeeshee waxa ay u muuqatay in qaar ka mid ah ciidammada gadoodka sameeyay aanay ku qanacsanayn hadalka uu madaxweyne Alassane Ouattara kaga dhawaaqay taleefishinka.
Waa ay adag tahay in la saadaaliyo in dhammaan ciidammada gadoodsan ay aqbali doonaan hadalka dowladda.
Gadoodka ayaa waxa uu fajac iyo argagax ku abuuray bulshada dalkaasi, oo waxa ay dib u soo celisay xusuusta dhibaatadii siyaasadeed iyo dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka jirtay 10-ka sano, taasi oo la soo afjaray 2011.